Importance of Oral Health – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ခံတှငျးသနျ့ရှငျးရေး က …. သငျ့အတှကျ ဘယျလောကျထိ အရေးကွီးသလဲ
တဈနနှေ့ဈကွိမျ သှားတိုကျရမယျ…. အစာစားပွီးတိုငျး အာလုတျကငျြးရမယျ…. စတဲ့ အခွခေံအခကျြတှဟော… အားလုံးသိပွီးသားတှပေါ….
ဒါပမေယျ့ တခါတရံ မလြေ့ော့ပေါ့ဆပွီး… သှားမတိုကျဘဲ အိပျရာဝငျသှားဖွဈတာမြိုးတှလေဲ ရှိတတျကွပါတယျ… အဲဒီအခါ ဘာတှဖွေဈလာနိုငျသလဲဆိုတဲ့ နောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးတှကေတော့ ဒီမှာပါ….
(1) သှားဖုံးရောငျရောဂါ.. သှားဖုံးပွညျတညျနာနဲ့ ပါးစပျတှငျး အနာဖွဈခွငျး
သှားမှနျမှနျမတိုကျဖွဈတဲ့အခါ… စားကွှငျးစားကနျြတှကေ ရောဂါပိုးတှပြေျောမွူးရာနရွောာကွီး ဖွဈသှားတတျပါတယျ… အဲဒီအခါ ပိုးဝငျပွီး သှားဖုံရောငျရောဂါအပါအဝငျ အနာတှပေါ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ
(2) သှားပိုးစားခွငျး… အခေါငျးပေါကျဖွဈခွငျး
(3) သှေးဆိပျသငျ့ခွငျး… နှလုံးအဆို့ရှငျရောငျခွငျး
ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ သငျ့ခံတှငျးထဲမှာ ရောဂါပိုးတှမြေားနရေငျတောငျ… သငျ့သှေးထဲရောကျမသှားတတျပါဘူး… သို့သျော အကွောငျးတစုံတရာ ကွောငျ့ ခုခံအားကြ ဆငျးနတောနဲ့ ကွုံကွိုကျရငျတော့… ဒီခံတှငျးထဲက ရောဂါပိုးတှဟော… သှေးထဲရောကျသှားပွီး သှေးဆိပျသငျ့တာ… နှလုံးအဆို့ရှငျရောငျတာ… နှလုံးအတှငျးနံရံရောငျတာတှကေို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ
(4) ဆီးခြိုရောဂါကို ထိနျးခြုပျရခကျစတေယျ
သငျ့မှာ ဆီးခြိုရောဂါရှိနတေယျဆိုရငျတော့ သှားကနျြးမာရေးကို… အထူးဂရုပွုဖို့ သငျ့ပါတယျ… ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ နောကျပိုငျး လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ…. သှားနဲ့ခံတှငျးမသနျ့ရှငျးရငျ ဆီးခြိုကို ထိနျးခြုပိရတာခကျခဲတတျလို့ပါပဲ
(5) နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါကို ပိုဖွဈစတေယျ
အံ့သွစရာ တှရှေိ့ခကျြဖွဈပမေယျ့…. သှားနဲ့ခံတှငျးသနျ့ရှငျးရေး အားနညျးသူတှေ မှာ… နှလုံးသှေးကွောရောငျရာကနေ နှလုံးသှေးကွောကဉျြး ရောဂါဖွဈနှူနျး သိသိသာသာ မြားပါတယျ..
(6) ကိုယျဝနျဆောငျတှေ လမစတေဲ့ကလေး မှေးနိုငျခမြေားတယျ
လလေ့ာမှူတှအေရ…. လမစတေဲ့ကလေး မှေးသူတှရေဲ့ 18ရာခိုငျနှူနျးဟာ…. သှားနဲ့ခံတှငျးရောဂါတှရှေိကွတယျဆိုပါတယျ..
သှားဖုံရောငျရမျးတာကနေ ထုတျလှတျတဲ့ အဆိပျ (toxins) တှဟော… အခငျြးကနဝေငျသှားပွီး ကလေးရဲ့ ကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးမှူကို နှောကျယှကျစပေါတယျ…
တပွိုငျနကျတညျးမှာပဲ ကလေးမှေးဖှားမှူကို အစပွုတဲ့ ဓာတျတှကေို စောစောထုတျလှတျပေးတဲ့အတှကျ…. ပေါငျမပွညျ့ လမစတေဲ့ကလေးမှေးနိုငျခမြွေငျ့မားတယျလို့ ဆိုပါတယျ….
ကဲ.. ဒီလောကျဆိုရငျတော့ သှားနဲ့ခံတှငျးသနျ့ရှငျးရေးဟာ… သငျထငျတာထကျ ပိုအရေးကွီးတာကို သတိပွုမိပွီထငျပါတယျ….
ဒါကွောငျ့ မနကျတဈခါ ညတဈတဈခါ ကောငျးမှနျတဲ့ သှားတိုကျတံနဲ့ တဈခါတိုကျရငျ အနညျးဆုံး နှဈမိနဈကွာအောငျ တိုကျပါ…
အစာစားပွီးတိုငျး အာလုတျကငျြး ပါ သှားကွားမှာညပျနတေဲ့ စားကွှငျးစားကနျြ တှဟော..သာမနျသှားတိုကျရုံနဲ့ မပွောငျနိုငျပါဘူး… dental floss လို့ချေါတဲ့ သှားပှတျကွိုးတှေ သုံးပေးပါ…
ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး က …. သင့်အတွက် ဘယ်လောက်ထိ အရေးကြီးသလဲ
တစ်နေနှ့စ်ကြိမ် သွားတိုက်ရမယ်…. အစာစားပြီးတိုင်း အာလုတ်ကျင်းရမယ်…. စတဲ့ အခြေခံအချက်တွေဟာ… အားလုံးသိပြီးသားတွေပါ….
ဒါပေမယ့် တခါတရံ မေ့လျော့ပေါ့ဆပြီး… သွားမတိုက်ဘဲ အိပ်ရာဝင်သွားဖြစ်တာမျိုးတွေလဲ ရှိတတ်ကြပါတယ်… အဲဒီအခါ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ဒီမှာပါ….
(1) သွားဖုံးရောင်ရောဂါ.. သွားဖုံးပြည်တည်နာနဲ့ ပါးစပ်တွင်း အနာဖြစ်ခြင်း
သွားမှန်မှန်မတိုက်ဖြစ်တဲ့အခါ… စားကြွင်းစားကျန်တွေက ရောဂါပိုးတွေပျော်မြူးရာနေရြာာကြီး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်… အဲဒီအခါ ပိုးဝင်ပြီး သွားဖုံရောင်ရောဂါအပါအဝင် အနာတွေပါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်
(2) သွားပိုးစားခြင်း… အခေါင်းပေါက်ဖြစ်ခြင်း
(3) သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း… နှလုံးအဆို့ရှင်ရောင်ခြင်း
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သင့်ခံတွင်းထဲမှာ ရောဂါပိုးတွေများနေရင်တောင်… သင့်သွေးထဲရောက်မသွားတတ်ပါဘူး… သို့သော် အကြောင်းတစုံတရာ ကြောင့် ခုခံအားကျ ဆင်းနေတာနဲ့ ကြုံကြိုက်ရင်တော့… ဒီခံတွင်းထဲက ရောဂါပိုးတွေဟာ… သွေးထဲရောက်သွားပြီး သွေးဆိပ်သင့်တာ… နှလုံးအဆို့ရှင်ရောင်တာ… နှလုံးအတွင်းနံရံရောင်တာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်
(4) ဆီးချိုရောဂါကို ထိန်းချုပ်ရခက်စေတယ်
သင့်မှာ ဆီးချိုရောဂါရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ သွားကျန်းမာရေးကို… အထူးဂရုပြုဖို့ သင့်ပါတယ်… ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နောက်ပိုင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ…. သွားနဲ့ခံတွင်းမသန့်ရှင်းရင် ဆီးချိုကို ထိန်းချုပိရတာခက်ခဲတတ်လို့ပါပဲ
(5) နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကို ပိုဖြစ်စေတယ်
အံ့သြစရာ တွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပေမယ့်…. သွားနဲ့ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး အားနည်းသူတွေ မှာ… နှလုံးသွေးကြောရောင်ရာကနေ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါဖြစ်နှူန်း သိသိသာသာ များပါတယ်..
(6) ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ လမစေ့တဲ့ကလေး မွေးနိုင်ချေများတယ်
လေ့လာမှူတွေအရ…. လမစေ့တဲ့ကလေး မွေးသူတွေရဲ့ 18ရာခိုင်နှူန်းဟာ…. သွားနဲ့ခံတွင်းရောဂါတွေရှိကြတယ်ဆိုပါတယ်..
သွားဖုံရောင်ရမ်းတာကနေ ထုတ်လွှတ်တဲ့ အဆိပ် (toxins) တွေဟာ… အချင်းကနေဝင်သွားပြီး ကလေးရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှူကို နှောက်ယှက်စေပါတယ်…
တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ကလေးမွေးဖွားမှူကို အစပြုတဲ့ ဓာတ်တွေကို စောစောထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့အတွက်…. ပေါင်မပြည့် လမစေ့တဲ့ကလေးမွေးနိုင်ချေမြင့်မားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်….
ကဲ.. ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သွားနဲ့ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးဟာ… သင်ထင်တာထက် ပိုအရေးကြီးတာကို သတိပြုမိပြီထင်ပါတယ်….
ဒါကြောင့် မနက်တစ်ခါ ညတစ်တစ်ခါ ကောင်းမွန်တဲ့ သွားတိုက်တံနဲ့ တစ်ခါတိုက်ရင် အနည်းဆုံး နှစ်မိနစ်ကြာအောင် တိုက်ပါ…
အစာစားပြီးတိုင်း အာလုတ်ကျင်း ပါ သွားကြားမှာညပ်နေတဲ့ စားကြွင်းစားကျန် တွေဟာ..သာမန်သွားတိုက်ရုံနဲ့ မပြောင်နိုင်ပါဘူး… dental floss လို့ခေါ်တဲ့ သွားပွတ်ကြိုးတွေ သုံးပေးပါ…